Mpanamboatra kafe mitete tanana tsara tarehy sy azo ampiharina | Bezzia
Maria vazquez | 06/04/2021 12:00 | lakozia
Ny fanomanana kafe dia ho antsika maro dia fombafomba izay manomboka ny fotoana fifaliana sy fiadanam-po amin'ny misasakalina na atoandro tolakandro. Mba hanaovana izany dia manana safidy hafa maro isika, dia ilay mpanamboatra kafe mitete manual fa anio isika dia manolotra ny tsara indrindra hahatratrarana kafe marefo nefa misy tsiro be dia be.
Kanto, azo ampiharina ary tsy misy tariby, Toy izao ireo mpanamboatra kafe mitete manual izay atolotray anio ao Bezzia. Izy rehetra dia manana sivana izay ametrahana ny kafe any anaty tany izay ametrahana tanana ny rano mafana fa miaraka amin'ny alokaloka samihafa hampidirana ny kafe. Melitta, Chemex na Hario, safidinao!
Nandritra ny taonjato maro, ny kafe dia namboarina tamin'ny alàlan'ny fanafanana kafe tany anaty vilany rano. Ary ireo masinina kafe ireo no mitahiry izany fotony izany nefa manatsara ny tsiro farany amin'ny kafe. Mora ampiasaina, manana koa izy ireo tombony maro noho ny karazana mpanao kafe hafa:
Maka toerana kely ao an-dakozia izy ireo.
Maivana izy ireo ary mora mihetsika.
Tsara tarehy izy ireo. Mahafinaritra azy ireo ny latabatra an-dakozia.
Tsy mila tariby izy ireo.
Tsotra ny asany
Ny fahatsorany dia mahatonga ny faharetany ho avo.
Tsy lafo izy ireo
4 Ahoana ny fomba fanaovana kafe
Fantatrao ve fa ny mpanorina an'i Melitta no namorona sivana kafe tamin'ny 1908? Taty aoriana, amin'ny taona 30 Melitta Bentz dia nanolotra sivana conical izay nanatsara ny kalitaon'ny kafe tamin'ny famokarana faritra lehibe kokoa hanalana azy. Ireo sivana izay fantatsika anio ary izany dia nanjary marika nampiavaka ny orinasa.
Ho hitanao ao amin'ny katalaogin'i Melitta plastika, vera ary porcelain mpihazona sivana miaraka amin'ny lalan-drivotra vaovao izay manome antoka ny fitrandrahana kafe voalanjalanja. Ankoatr'izay, ny fisokafany roa dia ahafahanao mizara ny fahafinaretana amin'ny fisotro kafe, satria afaka manomana roa miaraka ianao. Ary tsy handany vola mihoatra ny € 17 ianao.
Ny portafilters miaraka amin'ny Carait vera Melitta Pour Over dia mamela anao ihany ankehitriny manaova kafe amin'ny fomba tsotra sy kanto ho an'ny olona marobe. Ny carafe dia vita amin'ny vera borosilicate ary azo ampiasaina amin'ny rano mafana na mangatsiaka tsy misy fahatapahana. Izy io dia mety amin'ny microwave ary noho ny fonony azo esorina dia afaka sasana mora ao anaty vilia fanasana lovia izy.
Ny siny fitaratra Chemex fitaratra dia noforonin'ny mpahay simia alemana Peter Schlumbohm tamin'ny 1941. Ny endriny madio sy tsotra Ataovy tsara tarehy eo ambonin'ilay latabatra misy azy io. Ny maodely misy hazony hazo dia manaitra indrindra, ary koa manome hafanana amin'ny endrika, hisakana anao tsy hirehitra rehefa mitazona ny vera mafana.
Ny mpanamboatra kafe tanana dia misy amin'ny habe samihafa mba hikotrohana kaopy telo ka hatramin'ny telo ambin'ny folo. Ary ny famolavolana ny sivana fibre dia miavaka, matevina noho ny fifaninanana hitazona ireo singa, menaka ary voamaina mangidy tsy ho ao anaty kaopinao.
Niorina tao Tokyo i Hario tamin'ny 1921 ary namokatra vokatra fitaratra ho an'ny laboratoara simika. Ny fitaovanao V60 malaza indrindra, Namboarina mba hanatsarana ny portafilters nisy tamin'izany fotoana izany. Miaraka amin'ny zoro 60º, mikoriana mankamin'ny afovoan'ilay fikosoham-bary ny rano, manalava ny fotoana ifandraisana.
Nametraka ity carafe sy cone ity ny fanaovana kafe voasivana dia mety indrindra, amin'ny vidiny mirary (€ 25), dia afaka manana izay ilainao ianao amin'ny fanaovana kafe sivana am-piasana ao an-trano. Mba hahatratrarana izany dia mila manaraka fotsiny ny torolalan'ny orinasa ianao.
Ahoana ny fomba fanaovana kafe
Izay mpanamboatra kafe mitete amin'ny tanana no safidinao, ny fomba fanomanana ny kafe dia hitovy tsy miova afa-tsy ny tahan'ny kafe sy rano ilaina hahazoana ny vokatra tsara indrindra. Ny fanosorana ny sivana amin'ny rano mafana, ny lanjan'ny kafe anaty voamadinika ary ny fizarana azy tsara amin'ny sivana no dingana voalohany manaraka.
Avy eo dia mila manafana ny rano fotsiny ianao ary mandraraka azy ao anaty siny gooseneck. Fa maninona satria amin'izany dia ho mora aminao ny manampy rano mafana ambonin'ilay kafe amin'ny fihetsehana boribory hatrany afovoany ka hatrany ivelany. Ho zava-dehibe ihany koa ny mari-pana amin'ny rano; Tsy maintsy eo anelanelan'ny 90 sy 94 degre izy io. Raha tsy manana thermométer ianao dia ho ampy ho anao ny hahatratra 40 segondra aorian'ny famoahana azy.
Misy horonan-tsary marobe ao amin'ny YouTube miaraka amin'ny torohevitra mahasoa amin'ny fampiasana ireo mpanamboatra kafe mitete tanana, zahao izy ireo!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » lakozia » Mpanamboatra kafe mitete manual sy tsara tarehy